Airbus inoburitsa ndege yechi100 A220 inogadzirwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Airbus inoburitsa ndege yechi100 A220 inogadzirwa
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • France Kuputsa Nhau • Latvia Breaking Nhau • nhau • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Airbus yapemberera ndege yechi100 A220 inogadzirwa mutengi panguva yemhemberero kumahofisi epurogiramu yendege kuMirabel, Canada. Ndege, iyo A220-300, yakagadzirirwa Riga, Latvia-based airBaltic, inoratidzira nyowani uye yakasununguka kabhini dhizaini ine 149 zvigaro pamwe neyemazuva ano livery.
Mhuri yeA220 yakaungana kuAirbus 'Yekupedzisira Assembly Assembly Line muMirabel uyezve munguva pfupi yapfuura, zvakare pamusangano wechipiri wegungano muFoni, Alabama. Yekutanga yepasi A220 (yaimbonzi iyo C Series) yakaunzwa muna Chikumi 2016 kuna A220-100 kuvhurira oparesheni SWISS.
airBaltic yakava iyo A220-300 yekumisikidza oparesheni apo ndege yeLatvia yakagamuchira kuendeswa kweyekutanga A220-300 makore matatu apfuura, musi wa28 Mbudzi, 2016. airBaltic kubvira ipapo yakarairazve ndege yeA220-300 kaviri - ichiunza kurongeka kwayo kwakasimba kusvika ku50 ndege kuti ive iyezvino mutengi mukuru weEuropean A220. Iyo yendege ikozvino iri kushanda ngarava dzendege makumi maviri A20-220.
Mumusika unokwikwidza zvakanyanya, kusaenzana kwemafuta kwakakwenenzverwa nendege uye kuita kwakanakisa kwave kubatsira kuAirBaltic iyo ine zvikepe zvese -A220 semusana wehurongwa hwayo hwebhizinesi. airBaltic iri kushandisa yayo A220 ngarava kunzvimbo dzakasiyana dzeEurope neRussia pamwe nekuMiddle East. Parizvino inoshandisa kureba kwendege pane A220 - iyo 6.5-awa ndege kubva kuRiga kuenda ku Abu Dhabi.
Pakutanga yakagadzirirwa uye kuendeswa seBombardier C Series, iyo A220 ndiyo yega ndege yechinangwa-yakavakirwa pamusika wechigaro we100-150; inonunura isingakundiki mafuta kunyatsoshanda uye widebody mutakurwi nyaradzo mune imwechete-aisle ndege. Iyo A220 inounza pamwechete mamiriro-e-iyo-aerodynamics, zvigadzirwa zvemberi uye Pratt & Whitney yazvino-chizvarwa PW1500G dzakagadzirirwa turbofan injini yekupa inosvika makumi maviri muzana muzana mafuta epasi anopisa pachigaro zvichienzaniswa nendege yapfuura ndege, pamwe neakanyanya kudzikira emweya uye a yakaderedzwa ruzha tsoka. Iyo A20 inopa iko kuita kweakakura kamwe-aisle ndege.
Pedyo ne100 A220s ari kushanda nevashandi vatanhatu pamakondinendi mana. Pakupera kwaGumiguru 2019, iyo ndege yakanga yagamuchira mazana mashanu nemakumi matatu emaoda odhi kubva kune anopfuura makumi maviri vatengi pasi rese.